Black Wildebeest - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
iBlack Wildebeest (Connochaetes gnou)
I-Black Wildebeest inobumnyama kumzimba, imilenze eyomeleleyo kunye nomsila omhlophe. Zibini zesini zinezinzima, zithumela iimpondo. Iibhokhwe zilinganisa iimitha eziyi-1.2 kwikhwapha kwaye zilinganisa i-161 Kg ubunzima. Iinkomo ize ilinganise i-1.16 emitha emagxeni kunye nobukhulu be-130 Kg. Iimpondo zamathole ziqala ngokuthe ngqo, kwaye ziqala ukukhula isicatshulwa esimalunga neenyanga eziyi-9 ubudala.
Ngokuyinhloko i-yazingela, ngokukhethekileyo kokukhetha ukhetho olukhulu, kwaye ngamaxesha athile zitya izihlahla ze-karroid kunye nemifuno.
I-Black Wildebeest ifumaneka kwiintlobo ezintathu zeenkomo eziquka iinkomo ezikhuphisanayo ukukhangela iinkomo ezilamkelekileyo, kunye neenkomo zobomi. Iinkomo ezigqithisiweyo zikwahlula kwi-ndawo yemimandla nganye, nganye leyo ikhuselwe ngokukhuselekileyo. Ngokuqhelekileyo iinkunzi zeenkomo zikhulela kwisakhiwo sentlalo. Le ntlobo ibonisa ukuncamathiselwa okunamandla kwimimandla ethile, ekhethiweyo ukubonakala konke ukujikeleza.
Indawo yabo ekhethiweyo ivulekile, kwaye ikhusela ngokuthe ngqo indawo ezinengca ende kunye naluhlaza.
I-Black Wildebeest iyinto ekhoyo kuMzantsi Afrika. Ngokomlando, i-Black Wildebeest yayihlala kwiindawo ezisemaphandleni ezivulekileyo ezisemaphandleni zelizwe, ukusuka eNtshona Koloni, kwi-Free State, kwimimandla ephezulu ye-Transvaal, entshona yeLesotho, entshona yeSwazini kunye neendawo eziphantsi kweDrakensberg KwaZulu-Natal. Kutshanje kufakwe kwezinye iindawo zelizwe kunye namazwe angomakhelwane. Ngoqikelelo lwabemi malunga ne-12 00 alithathwa njengosongelo lokuphela.
Ukucinywa kwiinkalo ezininzi zendalo ngokweendlela zokulima i-Black Wildebeest kuphela isinda kwiifama zezemidlalo kunye nomhlaba wabucala, sele zenziwe ngokukodwa. Ziye zatshintshe-zihlala kwindawo ekude njengeKenya. Nangona amaqela amaninzi aye afumaneka kwiindawo ezisemaphandleni eMzantsi Afrika ngexesha elidlulileyo azizange zifuduke ngokubanzi njengoko iBlue Wildebeest isenza kwiindawo.